ALANZAYAR - Page 335 of 337 -
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှတိုက်၏ အရှေ့ တောင်ဖက် ဒေသတွင် တည်ရှိသည် ။ ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် (၂၆၁၂၂၈) ကျယ်ဝန်းပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများထဲတွင် ဧရိယာ အကျယ်ဆုံး အဆင့် ၄၀ – မြောက် နိင်ငံ ဖြစ်သည် ။ နိူင်ငံဧရိယာ၏ ၉၆.၉၄% မှာ ကုန်းမြေများဖြစ်ပြီး […]
“ထိုက်တန်ရင် ရောက်လာမှာပါ” ကိုယ်အရမ်း ချစ်ရသူကို ဆုံးရူံးမှာကြောက်နေလား မကြောက်ပါနဲ့ သင်သာ အကောင်းဆုံးထိုက်တန်သူဖြစ်ပါစေ သင့်ဆီ ရောက်လာမှာပါ။ အချစ်ဆိုတာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အရာပဲနေနေ သင်ဘယ်လောက်ပဲပေးဆပ်ပေးဆပ် ဘယ်လောက်ပဲ နားလည်ပေးပေး ဘယ်လောက်ပဲ ဘဝတစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သတ်အောင်ချစ်ခဲ့ချစ်ခဲ့ ကိုယ်ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ ထိုက်တန်မှာသာ ကိုယ်အနားမှာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ထာဝရရှိနေမှာပါ…. ကိုယ်အရမ်းတန်ဖိုးထားရသူက […]
အချစ်ဆိုတာ တန်ဖိုးထားမှ ပျော်မွေ့တာပါ
အချစ်ဆိုတာ တန်ဖိုးထားမှ ပျော်မွေ့ တာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ နေနိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူး နာကျင်စရာတွေ စုပုံလာလို့ နေတတ်သွားတာ . မပြောတော့တာ မဟုတ်ဘူးမပြောချင်လောက်အောင် စိတ်ကုန်သွားတာ . မငိုတတ်တော့တာ မဟုတ်ဘူးကိုယ့်မျက်ရည်နဲ့ ရင်းနှီးရလောက်အောင် မထိုက်တန်လို့ မျက်ရည်တွေ ကျမလာတော့တာ . နားလည်မှု မရှိတော့တာ မဟုတ်ဘူးကိုယ့်စကားတွေကို အရေးမထားပဲ […]
ဆရာ_ကျမနုပျိုလှပခဲ့ စဉ်တုန်းက ကျမထက် ၁ဝနှစ်လောက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျ ခဲ့တာ ဆရာ အသိပါ___။ အိမ်ထောင်ကျခါစ တုန်းက ကျမ အမျိုးသားဟာ အင်မတန် အားကိုးထိုက်တဲ့သူလို့ခံစား ခဲ့ရတယ် ။ ကျမ သူ့ အပေါ်အထင်တကြီးနဲ့အားကိုးချစ်ခင် ခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ …. အချိန်တွေကြာမြင့် […]
ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် မိန်းကလေးတွေ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အချက်(၅) ချက်
မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်နေပါစေ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုလိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် အလွန်ကိုဝမ်း နည်းတတ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ နောက်ဆက်တွဲ ဒီလိုအရာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်နော်။ (၁) သူကိုယ့်ကိုယ်မချစ်တော့ဘူးလို့ထင်လာတယ် တချို့ ယောကျာ်းလေးတွေက ချစ်သူဖြစ်တာကြာလာရင် အရင်ကလောက်ဂရုမစိုက်တတ်တော့သလို၊ ဂရုစိုက်ဖို့လည်း သိပ်မလိုဘူး၊ ငါတို့နှစ်ယောက်က ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး လို့ တွေးတတ်ကြပါတယ်။ […]
ချစ်သူကို ပြစ်ခွါချင်နေတဲ့ ယောက်ျားပိုင်းလုံးတို့ရဲ့ အမူအကျင့်များ
ချစ်သူကို ပြစ်ခွါချင်နေတဲ့ ယောက်ျားပိုင်းလုံးတို့ရဲ့ အမူအကျင့်များ “မင်းဝတ်စားထားတာတေကလည်း တောဆန်လိုက်တာ ဒီပုံကြီးနဲ့တွဲသွားရမှာ ငါရှက်လာပီ။ ဟိုကောင်မလေးတေ၀တ်ဆင်ထားတာကြည့်လိုက် စွန်းလန်းတယ်။ ဒီမှာ မင်းကတော့ ကြည့်အုံး။” အနီဝတ်တော့ အပြာရောင်မဟုတ်လို့ ၊ အပြာရောင်ဝတ်ပြန်တော့ အ၀ါရောင်မ၀တ်လို့။ ခေတ်ဆန်ဆန်ဝတ်ပြန်တော့ ဆတ်ကော့ လတ်ကော့နဲ့ ဘာပုံမှန်းမသိဘူး ဘာညာ။ ရိုးရိုးယာဉ်ယာဉ်ဝတ်စားပြန်တော့ တောဆန်တယ်တဲ့။ […]
ကိုယ့်ကို ရာဇ၀င်ထဲမှာထားခဲ့ပါ ကိုယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ အချစ်ရယ် မင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာ အဖြူရောင်သက်သက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း အချစ်ဆိုတာထက် ဂုဏ်တေ ငွေတေ ပကာသနတေ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတေကြားမှာ ငါမင်းကိုချစ်တဲ့ အချစ်ဆိုတာ အပေါးစား ဖော့ပြားသာသာအဆင့်ပဲ ထင်ထား တဲ့ မင်းကို မုန်းမိဖို့နေနေသာသာ ပိုတိုးပီး ချစ်မိနေပြန်တယ်။ အလုပ်မဖြစ်တော့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကို မင်းရည်းစားသစ်နဲ့ […]
ချစ်သူနှစ်ဦးဝေးကွာစေသောအကြောင်းရင်း အချစ်ဆိုတာ ရယူခြင်း ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ပေးဆပ်ခြင်း စွန့်လွှတ်ခြင်း စသဖြင့်အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုကြသည်။ အချစ်ဆိုတာ ကြီးတာ ငယ်တာ အိုတာ လှတာနဲ့လည်းမဆိုင်။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ယောက်ျားမိန်းမအားလုံး တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာတော့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့တွေ့ဆုံကြရသည်။ ကိုယ့်ချစ်သူကိုရယူပိုင်ဆိုင်ချင်ကြသည်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခွဲခွာကြရသည်လည်း ဒုနှင့်ဒေးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရင်နင့်စရာခွဲခွာမှု့တေကိုရှောင်ရှားဖို့ အောက်ပါအချက်များကို […]
မိန်းကလေးတိုင်း မဖြစ်မနေ ဖတ်ထားသင့်တဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ်
မိန်းကလေးတွေ လုံးဝဖတ်ထားသင့်တဲ့စာလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဒီမှာ…ညီမလေး ကိုယ့်ကို တစ်ကယ် မချစ်တဲ့လူအတွက် ပေးဆပ်နေရတာ တန်ရဲ့လား ကိုယ့်ကို ဥပေက္ခာပြုထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဆက်ချစ်နေရင်ရော…အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား… … ကိုယ့်အချစ်တွေကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်…နာကျင်ခံစားနေရတာတွေ ကိုယ်ပေးသလို ပြန်ရလာနိုးနိုးနဲ့ မျော်လင့်နေရတာတွေက ဖြစ်သင့်သလား သေချာစဉ်းစားပါအုံး… … … […]
စနေတွေကို လျှော့ မတွက်ပါနဲ့ စနေတွေ အကြောင်းကို မဖြစ်မနေလေ့လာကြည့်လိုက်ပါအုန်းနော်
စနေသားသမီးတွေဟာ ဒီလိုလေးတွေပါ (၁) နောက်ဆုံးမွေးနံဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အများတကာထက်ရှေ့ဆုံးကနေ ဦးစီးဦးဆောင် ပြုရမှ ကျေနပ်သူတွေ (၂) စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်စိတ်ထဲရှိတာကို ရှိတဲ့အတိုင်း ခပ်ရှင်းရှင်းပြောတတ်ကြလို့မကြာခန ပြသနာ ဖြစ်တတ်ကြသူတွေ (၃) သူတို့ရဲ့ စိတ်ကို မျက်နှာမှာ အကဲခက်လို့မရအောင်ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းသူတွေသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်း အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာပဲရင်ဖွင့်တတ်ကြတယ် (၄) အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် […]
« 1 … 334 335 336 337 »